देवदह नगरबासीको साथ र सहयोगविना कोरोनाविरूद्ध लड्न सकिदैन :नगरप्रमुख खत्री – Swasthya Samachar
विश्वव्यापी फैलिएको कोराना भाइरसको संक्रमणसँग सिङ्गो विश्व नै जुधिरहेका अवस्थामा देवदह नगरपालिका पनि यतिखेर कोरोना संक्रमणका विरुद्धमा योजनाबद्ध ढङ्गले होमिएको छ। देशव्यापी लकडाउनका अवस्थामा कोरोनाको रोकथाम एवम् नियन्त्रण सम्बन्धमा नगरमा भइरहेका गतिविधि लगायत आम जनमानसलाई स्पष्ट पार्ने लक्ष्यका साथ देवदह नगरपालिका प्रमुख हिरा बहादुर खत्री संग गरेको कुराकानी
देवदह नगरपालिकाले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागी चालेको मुख्य कदम के के हुन ?
प्रथम चरणमा हामीले सचेतनामूलक काम ग¥यौं । स्वास्थ्य शाखा, महिला स्वास्थ स्वयंसेवक दिदीबहिनी, निर्वाचित जनप्रतिनिधि, विभिन्न संघसंस्था, टोल सुधार समिति, राजनीतिक दलसँग मिलेरे सचेतान फैलायौं । ब्रोसर निर्माण र वितरण, स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम, सम्वाद, छलफल र जानकारी दिने काम पहिलो चरणमा भयो ।
दोस्रो चरणमा भारतबाट आउनेहरूको तथ्यांक संकलन, अन्य मुलुकबाट आएकाहरूलाई होम क्वारेन्टाइनमा राखेर दुई सय परिवारमा स्वास्थ्यकर्मी पठायौं । यसको अनुगमनको जिम्मा समुदायलाई नै दियौं ।
नगरपालिकाले ठूला कार्यक्रम नगर्ने, बिद्यालयमा ५ चैतसम्ममा सबै खाले परीक्षा सक्न भन्यौ । भीडभाड हुने हाटबजार बन्द गर्यौ, काष्ठकलासम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय गोष्ठी तय भएको थियो त्यो रोक्यौं । अहिले स्वास्थ्यकर्मीलाई आवश्यक पर्ने पिपिई जुटाइरहेका छौं, प्रदेश र संघीय सरकारबाट हामीलाई अहिलेसम्म आवश्यक सामाग्री प्राप्त भएको छैन तर पनि स्थायीन स्रोतबाटै जोडिरहेका छौं ।
स्वास्थकर्मीको मनोबल उच्च राख्न यहाँको स्वास्थ्य चौकी, निजी स्वास्थ्य क्लिनिक, मेडिकल कलेजमा क्वारेन्टाइन निर्माण गरेका छौ । लकडाउन घोषणापछि पनि प्रत्येक वडामा माइकिङ गर्ने, जनप्रतिनिधिमार्फत अनुगमन, प्रहरी प्रशासन परिचालन भइरहेको छ ।
लकडाउन जारी रहेको अवस्थामा दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने एवं विपन्न परिवारलाई राहत र सहयोग कसरी पु¥याइरहेको छ ?
लकडाउनबाट प्रत्यक्ष असर पर्ने वर्गलाई तत्काल राहत प्याकेज घोषणा गरेका छौं । २७ सय दुई घरलाई १० किलोका दरले चामल, २ किलो दाल, नुनतेल र साबुन बितरण गर्यौ । दोस्रो चरणको राहत बाँड्ने भनेर मापदण्ड बनाइ वडालाई भनिसकेका छौं ।
कालोबजारी गर्ने क्रम पनि बढेको गुनासो छ । यसको रोकथाम तथा नियन्त्रण कसरी भइरहेको छ ?
नगरपालिकाको कार्यपालिका सदस्य बिष्णु पाण्डेको नेतृत्वमा अनुगमन समिति गठन गरेका छौं । साथै नगरप्रमुख र उपप्रमुख पनि नगरका सबै स्थानमा अनुगमनका लागि पुगेका छौं । आग्रह, खबरदारी गरेका छौं ।
कतिपयलाई कारवाही र सचेत गरेर छाडेका छौं । अति आवश्यक उपभोग्य सामाग्री बाहेक अन्य सामाग्री खरिद नगर्न आग्रह गरेका छौ । व्यापारीलाई पनि खाद्यबस्तु र तरकारीको मुल्यसुची राख्ने बाध्यकारी नियम बनाएका छौं ।
सामान्य रूघाखोकी, ज्वरो र दीर्घरोगीहरूले उपचार नपाएको भन्ने कुरा सुनिन्छ यस्तो गुनासोको सुनाइ कसरी गर्नुभएको छ ?
यो सत्य हो । कोरोना संक्रमण फैलिरहेको बेला यस्ता बिरामीलाई स्वास्थ्य संस्थामार्फत केही समय ९१५ दिन, १ महिना को लागि स्वास्थ्यकर्मीको निगरानीमा घरमै औषधि पुर्याएका छौं । गर्भवतिको लागि क्याल्सियम, आइरन चक्की पनि ५–१० दिनलाई पुग्ने गरि व्यवस्थापन गरिरहेका छौं ।
ज्वरोका बिरामीले औषधि नपाएको भन्ने सूचना सञ्चारमाध्यमबाट आएका छन् । तर देवदहको सन्दर्भमा ज्वरोका बिरामीको सबै स्वास्थ्य चौकीमा जाँच भैरहेको छ । नगरबासीलाई हामीले अहिले देशको अवस्था असामान्य रहेको र यस्तो बेला स्वास्थ्यमा जटिलता भए मात्रै अस्पताल जान आग्रह गरेका छौं ।
नगरपालिकाले सर्वसाधारणका लागि टोल फ्री नम्बर राखेको छ । यसमार्फत पनि सेवाहरू लिन सकिन्छ । स्वास्थ्य चौकीहरूमा दैनिक रूपमा ८०–९० जनाले स्वास्थ्य परीक्षण गराइरहेका छन् । देवदह मेडिकल कलेजले फिवर डेक्स नै खडा गरेको छ । निजी स्वास्थ्य संस्थाहरू पनि सञ्चालन छन् ।
कोरोना संक्रमण फैलिएको अवस्थालाई कसरी व्यवस्थित गर्छ नगरपालिकालले ?
अहिलेसम्म विश्वको परिदृश्यलाइ हेर्दा र डक्टरको भनाइ अनुसार कोरोनाको औषधि बनिसकेको छैन । हाम्रो तयारी दुरीलाई कायम गर्ने, जनसम्पर्क हुन नदिने, लकडाउनको पुर्ण पालना गर्ने र संक्रमित देखिए लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा पुराउने हो । स्वाब परीक्षण गर्ने, नतिजा नआउँदासम्म आइसोलेशनमा राख्ने हाम्रो तयारी छ ।
अन्त्यमा संक्रमणको घडिमा नगरका जनतालाइ केहि भन्नुहुन्छ ?
देबदह नगरपालिकाको सबै संयन्त्र अहिले कोरोना संक्रमणको जुध्नका निमित्त सक्रिय भएर लागेको छ, हाम्रो सक्रियताले मात्र हुदैन नगरबासिको साथ र सहयोग बिना कोरोना संक्रमण संगको जुधाई छ ,त्यो कुनै पनि प्रकारको सरकारले चाहेर हुदैन देश बासिहरु नगरबासिहरुको साथ र सहयोगको आवश्यकता छ ।
त्यो आवश्यकता भनेको लकडाउनको पुर्ण पालना हो आजको यो परिस्थितीमा कुनैपनि बस्तुको सहज उपलब्धताको आशा राख्ने ,इच्छाहरु प्रकट गर्ने र त्यो सहज उपलब्ध होस भनेर हिडडुल र घुमफिर गर्ने बेला छैन ,हामी आफु भन्दा कमजोरलाइ सहयोग गर्दै लकडाउनको पुर्ण पालना गर्न म आग्रह गर्न चाहान्छु सामान्य तयबिहान हिडडुल गर्ने बेलुका खेल खेल्ने जमघट हुने परिपाटि बढेको छ।
यसलाइ न्युनिकरण गनुपर्छ ,विश्वबाट पनि हामिले पाठ सिक्नुपर्छ आर्थिक र भौतिक रुपले सम्पन्न मुलुकहरु यसको महामारी बाट बच्न सकेका छैनन जहा थुप्रै हस्पिटल संग जोडिएका स्वास्थ्य संग जोडिएका संरचना भएको देशले पनि त्यसलाइ चिर्न सकेको छैन ।
,छिमेकि मुलुक भारतमा पनि यसको प्रभाव दिनानुदिन बढ्दै छ । त्यसकारण सबै सचेत भएर यो परिस्थीतिमा सामान्य जिवन यापनको निमित्त परेका कठिनाइहरुका लागि जति बेला पनि हामि निर्बा्चित जनप्रतिनिधिहरु नगरबासिको सेवामा हाजिर छौ ।
तर अहिले सहुलियत खोज्ने,इच्छा प्रकट गर्ने बेला होइन घरमा बसेर यो लकडाउनको पुर्ण पालना गरेर यो संक्रमण भुुमिका निर्भाह गनुपर्दछ, यसका लागि नगरबासिहरु,सबै राजनितिक दल,संघसंस्था,सरोकारवाला वौद्धिक व्यक्तित्व सबैलाइ म ब्व्यक्तिगत तर्फबाट र नगरको तर्फबाट आग्रह गर्दछु ।
प्रदेश ५ सरकारले १३ करोड ६० लाख कोरोना विशेष अनुदान दिने
समाग्री अभाबमा भैरहवा र नेपालगञ्जमा नयाँ आरटी पिसिआर मेशिन संचालनमा ढिलाई